Matongerwo eNyika, 31 Zvita 2020
China 31 Zvita 2020
Zvita 31, 2020
Vanhu Votaura Pamusoro peDutumupengo reChalane kuManicaland
Pane mhuri dziri kuda rubatsiro dzinosvika makumi manomwe nesere dzakagariswa pachikoro cheMutambara Mission mushure mekutamiswa nehurumende sedanho rekudzichengetedza kubva kumafashamu eCyclone Chalane.
Mapurisa Oyambira Vanhu Kuzvibata Kana Vopemberera Kusvika kweGore Idzva
Mutauriri wemapurisa, VaPaul Nyathi, vati kupinda mumigwagwa vanhu chiita ruzha nedzimokori, vachirova mabhini kana kuita magungano edzisvondo hazvisi kubvumidzwa.
Vanoita Nyaya dzeMatongerwo eNyika Voita Maonero Akasiyana Pamusoro pa2020
Vanhu vakawanda vanoti vanowirirana kuti gore ra2020, iro riri kusvika kumagumo pakati peusiku, igore ranga rakaomera vana veZimbabwe zvikuru sezvo riri gore rakauya chirwere cheCovid-19, icho chichiri kunetsa pasi rose.
Muzvare Thokozani Khupe Vobatwa neChirwere cheCovid-19
Muzvare Thokozani Khupe avo vachangobva mukukundwa musarudzo dzekongiresi yechimbi chimbi yakaitwa nemusi weSvondo nebato ravo reMDC vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti vabatwa nechirwere cheCovid-19 uye vakakumbira vanhu kuti vavanamatire.
Veruzhinji Vokurudzirwa Kuti Vasatya Kubaiwa Nhomba yeCovid-19 Kana Vawana Mukana
Mumwe chiremba ari muno muAmerica uye vari chizvarwa cheZimbabwe, Doctor Simbiso Ranga, vanoti zvakakosha zvikuru kuti veruzihinji vazvipire kuwana nhomba yekudzivirira Covid-19, sezvo iri iyo chete nzira inokwanisa kuburitsa vanhu kubva mumatambudziko akonzerwa nedenda iri pasi rose.
Harare Yosarudza Mumwe Meya Apo VaMafume Voramba Vari Mutirongo
Meya veHarare, VaJacob Mafume, avo vakamiswa basa neMuvhuro negurukota rinoona nezvematunhu nemadhorobha, VaJuly Moyo, vacharamba vari mutirongo mushure mekunge dare rapamusoro, rasendeka parutivi mutongo waro pamari yechibatiso.
Muzvare Khupe naVaMwonzora Vave Makara Asionane
Mutauriri wechimwe chikwata cheMDCT, VaKhalipani Phugeni, vanoti komiti yepamusoro yebato ravo yabvumirana kusendeka parutivi zvakabuda pakongiresi yechimbichimbi yakasarudza VaDouglas Mwonzora semutungamiri mutsva webato.